Ngenxa njalo ukushisa nokugcinwa - beaver bahlala emanzini - izilwane kungadingeki nokuba ukhathazeke ngokusho ekuqongeleleni fat ongama, ngakho inyama yabo namanzi kakhulu futhi amafutha. Indlela ukupheka inyama -beaver? Cabangela eminye.
Fried, sikadali isidumbu yami ngamanzi bese uthathe yizicucu ezingafanele. Beka esitsheni ezijulile, engeza ziwuthenga ngezipuni kalamula, a ginger kancane ogayiwe, marjoram spoon kanye usawoti kanye pepper. Thina shiya efrijini imizuzu 30 ifilimu for zokuyithambisa. Phakathi naleso sikhathi, Bilisa umhluzi kusuka amathambo besikhumba saleso silwane. Engeza izinongo, ukuhlanza izaqathe kanye anyanisi, gazinga bese efakwa umhluzi. Ubilise ithambo 2 amahora kokupholisayo sikhathi elicwengekileyo. Kulolo ketshezi inyama-beaver gazinga epanini, engeza izaqathe kanye anyanisi, namakhambi kanye nezinongo kanye namakhambi. Ngemva kwemizuzu embalwa uthele umhluzi imizuzu cishe ingxenye yehora. Khonza nge imifino.
sikadali Geza bese nquma isidumbu izingcezu, exutshwe esincane pepper kanye nosawoti, citric acid. Beaver inyama umqulu ufulawa gazinga epanini kahle amafutha. Songa izithako etholakala epanini, engeza amafutha, amanzi (kungaba umhluzi). Ikhasi anyanisi bese isanqante, parsley oqoshiwe. Fry onion, engeza inyama, ukuthumela yashizi kwi indawo grater izaqathe kanye parsley. Ibila kuze kuphekwe, bese ufaka inkomishi ukhilimu omuncu kanye thumba futhi. Perfect side dish ukuze inyama esinjalo abilisiwe amazambane noma irayisi.
Beaver inyama lokudla okumnandi kakhulu, kodwa akukho ukudla kancane ezithakazelisayo, yasekuqaleni futhi kwanelise eyatholakala kusukela imisila isilwane. Ngakho, i-pair of izinto ze-altare kumelwe ahlanzeke futhi abe ukususa kubo kusukela isikhumba. Uthathe izingcezu ezincane bese efakwa esitsheni ezenziwe ngengilazi, ubumba noma koqweqwe lwawo enamathela. Thela inkomishi uviniga bese wengeza amanzi ukuze ketshezi ihlanganisa ngokuphelele imisila. Kungcono lokhu inqubo kwenziwe ebusuku, ke ekuseni ungaqala ukupheka. Khona-ke uthele amanzi bese wengeza 4 amalitha ketshezi kusukela empompini. Beka on isitofu engeza izinongo, garlic, onion, isanqante ingilazi irayisi. Linda kuze kube yilapho abilayo futhi ubilise imizuzu 20 - 30 kuze kube okusanhlamvu okuphekiwe. Khonza ne ukwengeza utamatisi unama (sauce) kanye zasemazweni.
Susa kusukela amathambo isidumbu, inyama dudula beaver. Hlanganisa usawoti, citric acid, garlic yashizi kanye pepper, grate base roll esebenzisa le nhlanganisela. Amaphrotheni isiswebhu kuze kube Foam okuqinile (droplet akufanele sokukhipha) uhlanganise ngayo izingcezu plums noma apula. Yabelana ku isidumbu bese uvula umqulu Friend, kumele tie ngentambo. Gcoba inyama nxazonke ibhotela bese efakwa isikhunta noma bhaka. Engeza kukhona ezimbalwa iingobho zamanzi kanye amaqabunga ambalwa laurel, ubhake kuhovini imizuzu engu-90, njalo ukuchelela inyama yabonakala ayo pan. Indishi eqeda kufanele uthathe tincetu futhi ngikhonze njengomshumayeli wesikhathi isidlo ukuze zemifino salads.
Indlela ukupheka beaver inyama, oyifundile umbhalo Yiqiniso, akusiwona zonke izindlela ezikhona. isilwane isidumbu kungaba izinto ilayisi futhi cranberry, torsion inyama ungenza Burgers noma meatballs i sauce elimnandi. Uma wayefisa, ungakwazi ngisho nabo babengicindezela ukuba ngibheme - konke kuncike iso lakho lengqondo futhi Isifiso sokuzenzela futhi Ngamangala umndeni wakho kanye nezivakashi.
Izilwane ezingavamile: ihlosi lase-Amur